Nankalaza ny faha 60 taonany ny alakamisy 30 septambra 2021 ny Polisim-pirenena. "Polisim-pirenena Miaro sy manampy ny vahoaka" no lohahevitra nanankinana ny fankalazana. Nomarihina tamin'ny fitokanana Tsangambato tetsy Anosy izany. Nanome voninahitra ny fotoana ny Praiminisitra lehiben'ny governementa, Ntsay Christian. Nanambara ity farany fa manan-danja eo anivon'ny vahoaka Malagasy ny Polisim-pirenena. Betsaka, hoy izy, ny asa vita ary mbola betsaka ny miandry. Ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka, Contrôleur Général de Police Randrianarison Fanomezantsoa Rodellys, kosa nilaza fa kihon-dalana hanehoana ny fomba fiasa vaovao ny faha 60 taonan'ny Polisim-pirenena . Anisan'izany ny fanehoana ny fahaiza-manao sy ny toe-tsaina lavitry ny kolikoly.
jeudi, 30 septembre 2021 14:05
Nianjera tamin’ny moto : Tovolahy iray mpianatry ny oniversite namoy ny ainy
Nindaosin'ny fahafatesana ny alarobia 29 septambra 2021 maraina i Romialdo, iray tamin'ireo mpianatry ny oniversite Antsiranana, niharan-doza tamin’ny moto ny alin’ny 10 septambra 2021 rehefa nody avy tany Ramena. Roalahy izy ireo, nanao taingin-droa no tra-doza. Efa tsara ka efa nivoaka hopitaly ny alatsinainy maraina teo ny iray. Nalefa maika notsaboina teto Antananarivo i Romialdo no izao nodimandry izao, na natao aza ny ala nenina rehetra. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 30 septembre 2021 13:24
Sary : TVHFB Mahajanga
Mahajanga : Vazaha lahy hita faty tao anaty lakandrano
Lehilahy teratany vahiny iray hita faty teo Manapatanana Amborovy Mahajanga androany maraina. Ahiana ho nisy namono izy, avy eo natsipy tao anaty lakandrano. Efa tonga teto ny vadiny nijery ny razana niaraka amin'ny fianakaviany. Nifarimbona tamin'ny fakana ny razana teo an-toerana ny BMH, miaraka amin'ny mpamonjy voina, nanome tanana koa ny TVHFB Mahajanga.
lundi, 27 septembre 2021 09:57
Lozam-pifamoivoizana tao Anteza : Noraisin’ny fanjakana an-tanana ny fitsaboana ireo naratra sy ny fampodiana ireo razana
Manoloana ny lozam-pifamoivoizana nitranga tao Anteza (PK 305+400) RN 7 Kaominina Fiadanana, Distrika Ambohimahasoa, Faritra Matsiatra Ambony, izay namoizana ain'olona 12 sy naharatrana 14 hafa dia tonga teny an-toerana ny delegasiona notarihin’ny Minisitry ny Fitaterana sy Famantarana ny Toetr’andro Tinoka Roberto nisolo tena ny governemanta, nahitana ihany koa ny avy amin’ny Minisiteran'ny Mponina, ny Minisiteran'ny Fahasalamana, ny Préfet, ny Goverinoran'i Amoron'i Mania sy Mahatsiatra Ambony ary ireo Depiote ato amin'ny Faritanin'i Fianarantsoa, ireo Talen'ny Sampandraharaham-panjakana, naneho ny fiaraha-miory sy mankahery ireo izay namoy havana tao anatin’ity loza ity. Noraisin'ny Fitrondram-panjakana an-tànana ny fitsaboana ireo marary. Norasinina an-tànana ihany koa ny ho enti-manana amin'ny fikarakarana ireo razana sy ny fitondrana ny vatana mangatsiakan'ireo namoy ny ainy hamonjy ny tanindrazany. Mampalahelo ny trangan-javatra toy izao ka anisan'ny hahafahana hisoroka izany ny fanarahan-dalàna sy ny fitandremana izay nasian'Atoa Minisitry ny Fitaterana teny manokana.
lundi, 20 septembre 2021 13:29
Niherenana- Vatomandry : Renim-pianakaviana namoy ny ainy niharan’ny fanolanana
Nandeha naka ravim-bomanga tany an-tsaha no nivoahana ny trano, vatana mangatsiaka no hitan’ny fianakaviany. Tao Mahalina Fokontany Lomboka, Kaominina Niherenana Distrika Vatomandry, no niseho ity heloka bevava ity, ny 16 septambra 2021 lasa teo. Nandeha naka ravim-bomanga tany an-tsaha no nivoahany ny trano io andro io, tokony tamin’ny 10 ora maraina. Tsy niverina anefa izy dia gaga ny vadiny, lalana efa fandehanany rahateo no nakan’ilay ramatoa ravim-bomanga io. Rehefa nitady azy ny vadiny tokony mitatao vovonana teo dia efa vatana mangatsiakan’ilay ramatoa mihoson-dra sady miboridana ny tapany ambany no hitany.
dimanche, 19 septembre 2021 13:45
Beronono Ambavatapia (RN7) : Fiara sy mpandeha maro no norobain’ny jiolahy
Nisy andian-jiolahy nametraka sakan-dalana teo Fandrianjato Beronono Ambavatapia, avaratr’Ambositra amin’ny lalam-pirenena faha-7 ny alin’ny alahady 18 septambra 2021. Amam-polony ireo jiolahy, sady mitam-basy no nampiasa zava-maranitra. Poa-basy sy tora-bato no niantefa tamin’ireo fiara tsy afa-niala tao anaty sakana. Nasesin’ireo jiolahy norobaina ireo fiara. Vola aman-tapitrisa, firavaka, finday niampy izay entana nentina no lasan’ireo jiolahy. Samy voaroba na ny mpandeha na ny mpamily. Maro ireo fiara vaky fitaratra. Nisy zandary ihany niara-dia tamin’ireo tandavana fiara nanao lava alina, saingy tsy nahatohitra ireo andian-jiolahy. Nizotra niakatra vohitra, niantsinanana ireo olon-dratsy taorian’ny fanafihana.
Ny fonja naorina eto Imerintsiatosika no fonja voalohany eto Madagasikara manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy manaraka ireo fepetra rehetra amin'ny fanajana ny zon'olombelona. Natolotra amin'ny fomba ofisialy ny zoma 17 septambra 2021 izany fotodrafitrasa lehibe izany teo ambany fiahian'ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA. Hahazaka voafonja miisa hatramin'ny 800 ity fonja eto Imerintsiatosika ity ary natao hitazomana ireo olona nahavita heloka bevava sy ireo sokajiana ho "dangereux" ho an'ny fiarahamonina. Ankoatra ireo trano fatorian'ireo voafonja dia hita ao an-toerana ihany koa ny trano fisakafoanana iombonana, ny efitra fidiovana sy fivoahana ary indrindra ny "parloirs" natokana hifampiresahan'ireo mpamangy amin'ireo voafonja. Voaaro sy tsara ambina tanteraka ny faritra rehetra eto amin'ity fonja eto Imerintsiatosika ity ary misy ireo "cameras de surveillance" manara-maso ny anatiny sy ivelany mandritra ny fotoana rehetra.
Nilanja sorabaventy mitaky ny fialan'ny filohan'ny departemantan'ny CROUA ireo mpianatra avy any amin'ny faritra Amoron'i Mania. Antony, ny fanalana ireo mpianatra mipetraka ao amin'ny Cité an'ny oniversite Ankatso voalohany izay nesorina tsy hipetraka ao amin'ny trano misy azy ireo, ka nosoloina mpianatra avy any amin'ny faritra hafa. Nitaky vahaolana ireto mpianatra ireto nandritran'ny 8 volana, saingy tsy nahitam-bokany izany hatreto. Niroso tamin'ny fanidina ny trano fiasan'ny talean'ny DICU izy ireo mandra-piandry ny vahaolana aroson'ireo tompon'andraikitra. Mampiady ny samy mpianatra ny talen'ny departemantan'ny CROUA hoy ny filohan'ny mpianatra avy ao amin’ny faritra Amoron’I Mania, Heritiana Oussen, ka mila esorina eo amin'ny toerany.
Nandefa iraka tany Guinée ny Vondrona ara-toekarena aty amin'ny faritry Afrika andrefana na ny Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao, organisation régionale), hijery ny toe-pahasalaman'i Alpha Condé, filoha teo alohan'i Guinée, izay nahongan'i Kolonely Mamady Doumbouya ny 05 septambra 2021. Mbola voatazona ao amin'ny toby miaramila manokana ity filoha teo aloha ity, ary salama tsara izy, izay mahazo fizahana fahasalamana manokana avy amin'ny dokotera mpitsabo azy, ary misakafo ara-dalana avy amin'ny mpahandro mahazatra azy hatramin'izay, voamarina fa tsy nisy fikasihan-tanana azy, na tsy fanajana ny maha olona azy, hoy ireo nanao ny fitsirihina, izay misy minisitry ny raharaham-bahiny maromaro avy aty Afrika andrefana, mandrafitra ny delegasionina ny zoma lasa teo.
mercredi, 15 septembre 2021 10:27
RN5 : Ahiana hitera-doza ilay “Bac” mampitohy Mananara sy Maroantsetra
Mety hiteraka loza ny “Bac” mampitohy an’i Mananara sy Maroantsetra, amin’ny lalam-pirenena faha-5 raha tsy misy ny fandraisana andraikitra haingana. Ho avy rahateo ny fotoam-pahavaratra. Misy vaky ka tsy mahazaka fiara vaventy intsony ilay “Bac” eo an-tananan’i Fahambahy. 10 000 Ariary ny saram-piampitana eto, ary mbola mandoa vidina gazoala.